Imeya ibalisa ngemali "eyathenjiswa uMasipala" - Ilanga News
Home Izindaba Imeya ibalisa ngemali “eyathenjiswa uMasipala”
lthi kabalekelelwanga ngokugculisayo
IMEYA yaseMsinga, uNkk Buyiswa Ngcobo, ochaza ngemisebenzi eyenziwe eMsinga. ISITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE
IKHALE ngesilonda sokushaywa ngemfe iphindiwe kwabantu baseMsinga imeya kamasipala wale ndawo, uNkk Buyiswa Ngcobo
mayelana no-R17 million ethi wathenjiswa ukunikwa umasipala wuhulumeni waKwaZulu-Natal ukuba ulwe nokhuvethe kodwa kwagcina kufike u-R900 000 kuphela.
Lokhu ikuveze ngeledlule oFabeni, eMsinga, ngesikhathi yethulela umphakathi okwenziwe wumasipala kule minyaka eyisihlanu iphethe umkhandlu.
“Kwabizwa yonke imikhandlu kwahlanganwa nondunankulu wesifundazwe (uMnu Sihle Zikalala), kwavunyelwana, kodwa kayizange ifike le mali.
“Endaweni yakithi kasilekelelwanga ngokugculisayo, uma kukhulunywa ngokhuvethe, ngisho amagumbi okugcina abahaqekile ngabodwana, saphoqeleka ukuba sisebenzise amahholo ethu omphakathi,” kusho uNkk Ngcobo.
Imeya ithi kunyakamali ozayo, umphakathi wakule ndawo wabelwe u-R182 million. Ithe ukunswinya kwalo masipala ngasemalini, kugqame ngisho odabeni lukagesi.
Itshele ILANGA ukuthi eminyakeni emithathu edlule, umasipala wayo wabelwa u-R30 million, kodwa le mali yehlela ku-R17 million kanti njengamanje iya ku-R4 million.
“Zonke lezi zinto ziyasihlupha, siyafisa ukuba omasipala abancane bayanikezwa ngisho amandla okuhli-nzeka umphakathi ngamanzi, kungabi wudaba lomasipala bezifunda ngoba izinkinga ezibhekana nabantu zibo-nwa yithina esiseduze kwabo,” kusho uNkk Ngcobo.
Uveze ukuthi ngesikhathi iqembu lakhe, i-IFP, lingena emandleni ngaphansi kukaMasipala wesiFunda uMzinyathi – uMsinga ongaphansi kwawo lafica izikweletu ezinkulu ezadaleka ngaphansi komshado we-ANC neNational Freedom Party (NFP), okwadinga ukuba zikhokhwe.
“Zonke lezi zinto ziphazamisile kakhulu, kodwa kuningi esikwenzile ukuxhasa umphakathi wakithi ngezi-sefo zokubiya izingadi nokudla emindenini ehlukene,,” kusho UNkk Ngcobo.
Phakathi kwezinto athi zenziwe ngo-2018-2019, wukwakhela abapheki izindawo zokusebenzela okwadla u-R54 000, wukuthuthukisa amakhono, imigwaqo, izinkulisa, wukungcwabela abaswele endaweni, wukwesekwa kwemifelandawonye nokusiza abaphila nokukhubazeka.
Kuphinde kwaxhaswa abafelokazi ngamathuba emisebenzi, izintandane, wukuvuselelwa kwamakhono amadala, yimicimbi yesintu, wukwesekwa kwezemidlalo, wukukhishwa kwemifundaze yabafundi abavela emindenini eswele, wukweseka abakhahlamezeke ngenxa yezinhlekelele, yimigwaqo efakwe itiyela wumasipala, wukufakwa kukagesi eNdanyana okuyindawo eyagqama ngesikhathi izakhamizi zakhona zimba umqwaqo (ngepiki) ngoba zikhala ngentuthuko.
UMnu Lennox Mabaso okhulumela ihhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, uthi bayaqala ukuzwa izindaba (zemali yokhuvethe eMsinga).
Uthe osopolitiki sebethole ithuba.
“Uhulumeni wethu uyazifikela eMsinga ngenhloso yokuthuthukisa abantu bakhona.
“Abantu bayalazi iqiniso ukuthi uMsinga siwenzele okuningi kakhulu uma kuqhathaniswa naseminyakeni edlule.
“Lokho nje okukhulunywa yimeya, kuzomele sikufakele izibuko, kasibafuni abantu abadukisayo, besebenzisa usizi lomphakathi,” kusho uMnu Mabaso.
Previous articleUbizwe ngesilwane unozinti weSundowns
Next articleKubatshazwa ukubulawa kwesalukazi ngesihluku